Project Engineer (Electrical) | Authentic Group Of Companies
လုပျငနျးနှငျ့ ဒီဇိုငျးအရ Single Line Diagram နှငျ့အသုံးပွုမညျ့ Material ပစ်စညျးမြားနားလညျပွီး လိုအပျသော ပစ်စညျးမြား ခနျ့မှနျးတှကျခကျြနိုငျကာ တပျဆငျတညျဆောကျခွငျး (Installation) လုပျငနျးသခြောကွီးကွပျ ဆောငျရှကျနိုငျသူဖွဈရမညျ။
• လုပျငနျးအောငျမွငျရနျ မိမိတညျဆောကျရေးအဖှဲ့သာမက သကျဆိုငျရာဌာနဆိုငျရာမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပေါငျးစပျ ပွောဆိုနိုငျသူ ဖွဈရမညျ။
• လုပျငနျးအောငျမွငျရေးအတှကျ အခကျအခဲနှငျ့ ဖိအားမြားရငျဆိုငျနိုငျပွီး အလုပျပငျပနျးမှုဒဏျခံနိုငျရမညျ။
• လုပ်ငန်းနှင့် ဒီဇိုင်းအရ Single Line Diagram နှင့်အသုံးပြုမည့် Material ပစ္စည်းများနားလည်ပြီး လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ကာ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း (Installation) လုပ်ငန်းသေချာကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန် မိမိတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သာမက သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် ပြောဆိုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
• လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက် အခက်အခဲနှင့် ဖိအားများရင်ဆိုင်နိုင်ပြီး အလုပ်ပင်ပန်းမှုဒဏ်ခံနိုင်ရမည်။
• AGTI, B.E(EP) ဘှဲ့ရရှိပွီးသူဖွဈရမညျ။
• PE လုပျသကျအနညျးဆုံး(၅)နှဈအထကျရှိရမညျ။ Power Transmission Line, High Tension Line နှငျ့ ဓာတျအားခှဲရုံလုပျငနျး(Site) အတှအေ့ကွုံရှိသူဖွဈရမညျ
• AGTI, B.E(EP) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• PE လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၅)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ Power Transmission Line, High Tension Line နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံလုပ်ငန်း(Site) အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်
Site Allowances+ Phone Allowance+ Uniform+ Yearly Bonus
The first foundation of Authentic Group of Companies namely Authentic Construction and Authentic Trading were formed in Yangon, Myanmar in March 2009. For3years, Authentic Construction has specialized in the field of lndustrial and Commercial sectors such as factories, apartments, hotels and residential buildings.The Authentic Construction is actually formed not only with civil engineers but also with the leading and well experienced engineers in water and wastewater & Production.
Can you work long term.
Can you work other division sites?